Merry Christmas နော်!!!
Saint Nicholas ဟုခေါ်သော ကြင်နာပြီး ပျော်ရွှင်သော အမျိုးသားတစ်ဦးရှိသည်။ဖြူစင်သော မုတ်ဆိတ်မွေးနှင့် အနီရောင် ၀တ်စုံရှည်ကို အမြဲဝတ်ထားသည်။ဆင်းရဲသားများကို လက်ဆောင်များ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အမြဲတမ်း ကူညီလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်သည်။နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ 24 ရက်နေ့ ညမှာ အေးတဲ့ မြောက်ပိုင်းက ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ချန်ထားလေ့ရှိတဲ့...
EIBOARD သည် နှစ် ၈၀ ပြည့် တရုတ် ပညာရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း ပြပွဲကို အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
EIBOARD သည် နှစ် ၈၀ ပြည့် တရုတ် ပညာရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း ပြပွဲကို အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့သည်။EIBOARD အဖွဲ့သည် 2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 23-25 ​​ရက်နေ့တွင် နှစ် 80 ပြည့် တရုတ် ပညာရေးဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း ပြပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ "IOT စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ဉာဏ်ပညာ ပေါင်းစပ်မှု!" ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် LED အသံဖမ်းနိုင်သော စမတ်ကျောက်သင်ပုန်း V4.0 အသစ်ကို ပြသခဲ့သည်။
စမတ်ဘုတ်မှ သင်ကြားမှုမုဒ်သို့ ပြောင်းလဲမှုများ
သမားရိုးကျ သင်ကြားမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရာအားလုံးကို ဆရာမှ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ သင်ကြားမှု အကြောင်းအရာ၊ သင်ကြားမှု နည်းဗျူဟာများ၊ သင်ကြားရေး နည်းစနစ်များ၊ သင်ကြားမှု အဆင့်များနှင့် ကျောင်းသားများ၏ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဆရာများက ကြိုတင် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ကျောင်းသားများသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အတင်းအကျပ်သာ ပါဝင်နိုင်သည် ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ...
Led အပြန်အလှန်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို နည်းလမ်း4သွယ်ဖြင့် မည်သို့အများဆုံးပြုလုပ်ရမည်နည်း။
တစ်ချိန်တည်းတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် အသိပညာကို အများဆုံးအသုံးချပါ။လက်ရေးမှတ်စုများတွင် ပါဝင်ရန် အစည်းအဝေးရှိလူတိုင်းကို ရယူပါ (လက်ရေးဖြင့် အသိအမှတ်ပြုမှုသည် ရွေးချယ်ထားသော မျက်နှာပြင်လက်ရေးအား ပုံမှန်စာသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများပြုလုပ်ရန် စခရင်ပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာကို အသုံးပြုပါ)။လုပ်ပါ...
စာသင်ခန်းအတွင်း အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်သင်ကြားမှုအတွက် သင့်လျော်သော ထုတ်ကုန်ကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သင်ယူမှုအတွက် စမတ်ဘုတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအခါ၊ အောက်ဖော်ပြပါသော့များသည် ကောင်းမွန်သောကိုးကားမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ချိတ်ဆက်မှု ပရိုဂျက်တာ၊ ဝှိုက်ဘုတ် သို့မဟုတ် ထိတွေ့ဘုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆရာများအနေနှင့် ၎င်းကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ရန် ၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများ (နှင့် ကျောင်းသားများ၏) ကို ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် စဉ်းစားပါ...
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အခမ်းအနား။
တောင်ထိပ်သို့တက်ကာ ခရီးသစ်တစ်ခုတွင် ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းပါ။၁၉၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့အထိ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၁၀၀ အတွင်း CPC သည် စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး ...
Ludao တွင် Date|Fang Cheng သည် 79 ကြိမ်မြောက် China Educational Equipment Exhibition သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်
2021 ခုနှစ် ဧပြီလ 23 ရက်နေ့မှ 25 ရက်နေ့အထိ၊ 79 ကြိမ်မြောက် China Educational Equipment Exhibition ကို China Educational Equipment Industry Association မှ ကမကထပြုကာ Fujian ပြည်နယ် ပညာရေးဌာနနှင့် Xiamen Municipal People's Government တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော Xiamen International Conven တွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားစတင်ခြင်း|2021 ရှေ့သို့ အတူတကွ ပိုမိုမြင့်မားစွာတက်ပါ။
21-02-20 ရက်နေ့တွင် admin မှ
2021 ခုနှစ် နွားနှစ်၊ စန္ဒယား ဇန်န၀ါရီလ9ရက်နေ့ နှစ်သစ်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပြီး အနီရောင် စာအိတ်တွေကို တံခါးဆီ ယူဆောင်လာကာ Hongqiao Park မှာ အနီရောင် အတူတူ လမ်းလျှောက်ရင်း အနီရောင် ခရီးသစ်ကို စတင်လိုက်ပါ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ပထမဆုံး အစားအစာ အပြည့်အဝ ပျော်ရွှင်ပြီး လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ဖက်ထုပ်များ အသီးအနှံ ၊ အချိုပွဲ ၊ အရသာလေးတွေ လိုက်စားကြရအောင်...
ပျော်ရွှင်စရာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး | Fang Cheng နဲ့ မင်း အပြောင်းအလဲတွေကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အခါသမယတွင်၊ Fangcheng ၏ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၊ သုံးစွဲသူများနှင့် 11 နှစ်ကြာအားပေးခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေများအား စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ တောင်းယူကြသည်။အားလုံးပဲ အကောင်းဆုံး ၊ အကောင်းဆုံး ၊ ဖန်တီးမှုတွေ နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ် ။နှစ်သစ်မှာ...